Fikrado badan oo la isku daro dhididkaaga xilliga qaboobaha | Ragga Stylish
Shan siyaabood oo laysugu daro dhididkaaga xilliga jiilaalka
Hadda, dhididka ayaa haya tiro isku-dhafan oo aan xad lahayn (qandhada isboortiga ayaa daryeeshay taas). Taasina waa sababta ay ugu badbaado badan tahay in la yiraahdo waxay noqdeen wax walba oo ka kooban labiska labiska ragga.
Waxyaabahan soo socdaa waa dariiqooyin laysku daro dhididkaaga waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad tixgeliso jiilaalkan Fikradaha, oo lagu qabtay surwaalo kala duwan, in waxay kaa caawin doonaan inaad ku guuleysato labadaba muuqaal iyo magaalo iyo muuqaal casriga ah.
1 Dharka dhididka + Jiinisyada maqaarka
2 Sweatshirts + Jeexitaanka Lugta Toosan
3 Sweatshirts + surwaal dharka
4 Dhididka + joggers
5 Dhididka + chinos
Dharka dhididka + Jiinisyada maqaarka
Jiid & Bear
Jiid & Bear, € 17.99
Waa sharad aamin ah marka ay timaado abuurista muuqaal caadi ah oo raaxo leh oo jiilaal ah. Labadan qaybood si fiican ayey u shaqeeyaan. Kaliya tixgeli dhididka weyn si aad isugu dheelitirto muuqaalka kore.
Sweatshirts + Jeexitaanka Lugta Toosan
Mr Porter, 140 XNUMX
Beddelka jiinisyada maqaarka, jooniska jilicsan ee jilicsan iyo kuwa tooska ah (kuwa tooska ah ee bowdyaha oo bilaabaya inay jilbaha taabtaan) ayaa koox weyn ka dhigi doonta dhididkaaga, gaar ahaan kuwa adag, kuwa caatada ah. Ku dar qaar ka mid ah dharka isboortiga si aad u hesho muuqaal u waxyooday sideetamaadkii iyo sagaashannadii.
Sweatshirts + surwaal dharka
PS waxaa qoray Paul Smith
Mr Porter, 105 XNUMX
In kasta oo moodooyinka qaabaysan qaarkood ay ka badnaan karaan sarajoogga surwaalka dharkaaga, haddii aad rabto inaad si ammaan ah ugu ciyaarto, dooro qaybo cad, sida tan PS ee Paul Smith. Si ka duwan jooniska, markay tahay dharka dharka, dhididka oo si fiican u tilmaamaya silhouette ayaa lagama maarmaan ah. Ka fikir ku habboonaanta funaanadaha tolnimada wanaagsan.
Dhididka + joggers
Waa fikradda ugu dabacsan ee dhan, inkasta oo aysan ugu yaraan ugu qurxin taas. Kaliya waa inaad ogaataa xaaladaha ay ku habboon tahay, taas oo ay ugu wacan tahay isbeddelka isboortiga, waqtigan xaadirka ah waxay aad uga fogyihiin goobaha ciyaaraha. Xafiisku weli waa xad aan la dhaafi karin, in kasta oo yaa og waxa mustaqbalku inagu keeni doono.
Dhididka + chinos
Soo dhaweyso isboortiga bilicsanaanta adigoo isku dhejinaya dharkaaga dhididka ah ee chinos iyo kabaha kabaha. Kuwa qaabka magaalooyinka, sida tan Diesel, waa kuwa sida ugu fiican u shaqeeya. Sidoo kale, tixgeli inaad siisid sagxadaha surwaalkaaga laba jeesto muuji sharaabaadyadaada isboorti, oo markaa xoojiya vibes skaterka. Ama waxaad had iyo jeer si toos ah ugu sharxi kartaa surwaal la jaray.
Ogsoonow: Qiimaha oo dhan waxaa loogu talagalay dhididka oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Shan siyaabood oo laysugu daro dhididkaaga xilliga jiilaalka
Ma fiicantahay in la waydiiyo lamaane?
Sidee looga fogaadaa xad-dhaafka Kirismaska?